15 Ka -qeybgalayaasha Duulimaadka Lacagta Ugu Badan | Diyaaradaha Ugu Fiican | Talooyin
Bogga ugu weyn 15 Ka -qeybgalayaasha Duulimaadka Lacagta Ugu Badan | Diyaaradaha Ugu Fiican
15 Ka -qeybgalayaasha Duulimaadka Lacagta Ugu Badan | Diyaaradaha Ugu Fiican
Isha sawirka: www.naibuzz.com
Ma xiisaynaysaa inaad ogaato shaqaalaha ugu sarreeya ee duulimaadyada adduunka? Kadib hubi maqaalkan wargelinta ah. Halkan waxaad ka heli doontaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan liiska Diyaaradaha ugu Lacag-bixinta Badan Adduunka iyo kaaliyayaasha duulimaadka ee ugu mushaarka badan.
In badan oo naga mid ah ayaa isweydiiyay waxa ay qaadanayso in diyaaraddu sii socoto iyadoo dhulka ka sarraysa. Duuliye ahaan, mas'uuliyadda xirfadda waa in la hubiyo ammaanka rakaabka iyo shaqaalaha.
Mas'uuliyaddan sare waxay u baahan tahay xirfad iyo xirfado heer sare ah; labada sifo ayaa aad loo raadsadaa shirkadaha diyaaradaha. Mushaharka shaqaalaha diyaaradan waa mid gaar ah haddii qofku buuxiyo xadka ugu yar si uu ugu qalmo.
Shakhsi kastaa wuxuu ku dadaalaa inuu u shaqeeyo shirkadaha ugu fiican beerkooda. Shirkado diyaaradeed oo badan ayaa ahaa kuwo si cad ugu tartamaya suuqa tartanka. Laakiin wali waxay is weydiinaysaa su’aasha.
Noqoshada adeegaha duulimaadku ma tahay doorasho xirfadeed oo wanaagsan?
O haa! Shaqaalaha diyaaraddu waxay ka mid yihiin xirfadleyda aadka loo doon doonayo ee adduunka.
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ku saabsan doorashada waddada xirfadda. Faa'iidooyinka ka mid noqoshada duulimaadka waxaa ka mid ah in aad fursad u hesho in aad dunida ku safarto, baadho meelo cusub oo aad barato dhaqammo cusub.
Natiijada shaqadan darteed, aragtidaada ayaa la ballaarin doonaa ilaa ugu badnaan, iyo xirfadahaaga isgaarsiinta ayaa si aad ah u hagaagaya.
Shaqaalaha diyaaraddu si fiican ma u qaataan mushaharka?
Waqtigan xaadirka ah, aragtida ka -qaybgalayaasha duulimaadku waa mid togan.
Tobanka sano ee soo socda, koboca xirfadaha ayaa la filayaa inuu gaaro 10%, taas oo aad uga sarreysa celceliska marka loo eego shaqooyinka kale ee Mareykanka.
Baahida loo qabo mihnaddan ayaa laga yaabaa inay kor u kacdo maadaama safarka hawadu uu noqdo mid caan ah oo la heli karo.
Guud ahaan, dad badan ayaa saadaalinaya in kororka baahida loo qabo ay ka dhalan doonto mushaar badan shaqaalaha ka shaqeeya duulimaadka.
Akhri: 17 Shaqaalaysiiyaha Ugu Mushaarka Badan USA | Shirkadaha Ugu Fiican Iyo Gobolka
Sida loo noqdo adeegaha duulimaadka (Tilmaan tallaabo tallaabo)
Hawlwadeennada duulimaadka ee diyaaraddu waa inay shahaado ka haystaan ​​Maamulka Duulista Hawada ee Federaalka (FAA) oo ay tababar ka helaan loo -shaqeeyaha.
Shuruudda waxbarasho ee ugu yar ee ka -qaybgalayaashu waa dibloomada dugsiga sare ama u dhiganta iyo waayo -aragnimada shaqada ee adeegga macmiilka.
Codsaduhu waa inuu ahaadaa ugu yaraan 18 sano, haystaa baasaboor shaqeynaya, u qalma inuu ka shaqeeyo Mareykanka, oo ku gudbo baaritaanka asalka iyo baaritaanka daroogada.
Intaa waxaa dheer, waa inay lahaadaan aragti la saxi karo ugu yaraan 20/40 oo inta badan waa inay buuxiyaan shuruudaha dhererka diyaaradda. Waxa kale oo laga yaabaa in loo baahdo qiimayn caafimaad oo loogu talagalay ka -hawlgalayaasha duulimaadka.
Shaqaalaha diyaaraddu waa inuu lahaadaa muuqaal xirfadeed, oo aan lahayn tattoos, daloolin, iyo timo ama qurxiyo aan caadi ahayn.
1. Shuruudaha Waxbarashada Loo -shaqeeyayaasha Duulimaadka:
Si aad u noqoto shaqaale diyaarad, waxaad caadi ahaan u baahan tahay dibloomada dugsiga sare.
Codsadayaasha leh qaar ka mid ah koorsooyinka kuleejka waxaa doorbidi kara qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha. Shaqaalaha diyaaradaha qaarkood ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay si fiican ugu hadlaan luuqad shisheeye. Shaqaale badan oo duulimaad ayaa iska diiwaangeliya akadeemiyada duulista.
2. Tababarka Ka -qaybgalaha Duulimaadka
Si ay u noqdaan kuwo haysta shahaadada FAA, duuliyeyaashu waa inay ku tababartaan xarunta tababarka duulimaadka ee diyaaradda.
Shirkaddu waxay siisaa shaqaalaha duulimaadka tababarkooda bilowga ah, kaasoo caadi ahaan soconaya inta u dhexeysa 3 iyo 6 toddobaad.
Iyadoo qayb ka ah tababarka, tababarayaashu waxay bartaan hababka deg -degga ah sida daad -gureynta diyaaradaha, adeegsiga qalabka gurmadka, iyo maamulidda gargaarka degdegga ah.
Tababar dheeraad ah ayaa la siiyaa hawlaha shirkadda, xeerarka duulimaadka, iyo mas'uuliyadaha shaqada.
Markay dhammeeyaan tababarkooda, ardaydu waxay ka qayb qaataan duulimaadyada tababarka. Ku shaqaalaynta diyaaradda waxay u baahan tahay inay dhammaystiraan tababar.
Hawl-wadeennada duulimaadka waxaa FAA siisa Shahaadada Aqoonta Muujineysa ka dib markii ay ka gudbeen tababarkii hore oo ay sii wadaan inay helaan tababbarka shaqada marka loo baahdo loo-shaqeeyahaagu.
3. Khibrad Shaqo oo ku saabsan goob laxiriira Shaqaalaha Duulimaadka
Kahor intaanay noqon kalkaaliye duulimaad, shaqaaluhu sida caadiga ah waxay u baahan yihiin inay leeyihiin 1 ama 2 sano oo waayo -aragnimo adeeg ah.
Khibraddan oo ay ku jirto adeegga macmiisha makhaayadaha, hoteellada, iyo meelaha lagu nasto ayaa ku caawin karta.
Fahamka wanaagsan ee xirfadaha adeegga macmiilka oo lagu kobciyay waayo-aragnimada iibka ama jagooyinka bixiya xiriir dhow oo lala yeesho dadweynaha ayaa sidoo kale caddayn kara inay faa'iido u leedahay guusha kaaliye duulimaad ahaan.
4. Ruqsadaha, Shahaadooyinka, iyo Diiwaangelinta Shaqaalaha Duulimaadka
Shahaadada FAA ayaa looga baahan yahay dhammaan shaqaalaha duulimaadka. Shahaadada waxaa la kasbadaa ka dib marka la dhammaystiro barnaamijka tababarka loo -shaqeeyaha oo laga gudbo imtixaan.
Hawlwadeennada duulimaadku waxay haystaan ​​shahaado si ay uga shaqeeyaan noocyo diyaaradeed oo gaar ah waana inay qaataan tababar khaas ah nooc kasta oo diyaarado ah oo ay ku shaqeeyaan.
Barnaamij tababar oo soo noqnoqda ayaa sidoo kale la bixiyaa sanad walba si loo joogteeyo shahaadada ka -qaybgalayaasha.
Akhri: 25 Shaqooyinka Ugu Mushaharka Badan Florida
Intee in leeg ayay shaqaalihii duulimaadku sameeyaan?
Nasiib darro, ma jirto jawaab toosan oo su’aashan ah. Waxaa jira doorsoomayaal aad u badan oo ku lug leh. Si kastaba ha ahaatee, waxaan kula tegi doonaa kuwan.
Dhexdhexaadiyaha duulimaadku wuxuu kasban karaa inta u dhaxaysa € 20,001 iyo € 45,001 ($ 22,001 illaa $ 49,000) sannadka ugu horreeya.
Xaqiiqdu waxay tahay, dadka qaar ayaa kasban doona lacag ka badan kuwa kale - waan ogahay saaxiib kaas oo sannadkii ka qaata $ 64,000 duulimaadyada diyaaradaha gaarka loo leeyahay - halka qaar kalena ay heli doonaan wax ka yar $ 10,000. Kuwa u shaqeeya shirkadaha duulimaadyada ee Hungary ee qiimaha jaban, tusaale ahaan, waxay qanciyaan kan dambe.
Si kasta oo aad u bilowdo u shaqeynta shirkad diyaaradeed, waxaad qiyaasi kartaa oo kaliya dakhligaaga bil kasta iyadoo ku xiran inta duulimaad ee aad qaadato.
Hadda aan si toos ah ugu galno shirkadaha diyaaradaha ee ugu mushaarka badan shaqaalaha ka shaqeeya duulimaadka.
Ka -qaybgalayaasha Duulimaadyada iyo Diyaaradaha ugu Lacagta Badan
Hoos waxaa ku qoran liiska 15 -ka diyaaradood ee ugu mushaharka badan kalkaaliyaasha duulimaadka ee Mareykanka, oo ay weheliyaan mushaharkooda iyo macluumaadka lacag bixinta dheeraadka ah.
1. Diyaaradaha Alaskan
Ka -qeybgalayaasha Duulimaadka ee Alaskan Airlines waxay qaataan celcelis ahaan mushahar dhan $ 53,000 sannadkii.
La shaqaynta mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada ee ugu mushaarka badan, qofku wuxuu filan karaa mushaharka sannadlaha ah ee ah $ 113,000 celcelis ahaan, halka kuwa bilowga ahi ay filan karaan mushahar sanadle ah oo ah $ 27,000 celcelis ahaan.
Tani waxay muujineysaa sida ay ugu wanaagsan tahay in laga shaqeeyo Alaskan Airlines. Shaqaalahooda ugu sareeya ee duulimaadka ayaa si fiican loo siiyaa mushaharkooda.
Iyada oo qayb ka ah barnaamijyadooda shaqaalaha, Alaska Airlines waxay kaloo bixisaa gunnooyin, guddiyo, iyo qaybsiga macaashka shaqaalaha diyaaraddooda.
Celcelis ahaan, foomamkaan mushaharka ahi waa $ 3,400 sanadkii.
2. Diyaaradda United
Shaqaalaha duulimaadyada diyaaradaha ee United Airlines ayaa qaata celcelis ahaan mushahar dhan $ 44,219 sanadkii. Dadka bilowga ah waxay filan karaan inay kasbadaan kaliya $ 28,000 sanadkii, halka inta badan ka -shaqeeyayaasha duulimaadka ee khibrada leh (10%ugu sarreeya) ay helaan celcelis ahaan $ 100,000 sanadkii.
Sahankeenu wuxuu muujinayaa in United Airlines ay siiso shaqaalahooda duulimaadka mushaharka ugu sarreeya marka la barbar dhigo diyaarad kasta oo kale. Shirkaddu waxay siisaa fursado dhiirrigelin oo heer sare ah ka -hawlgalayaasha duulimaadka ee leh khibrad iyo jacaylka xirfaddooda.
Intaas waxaa sii dheer, United Airlines waxay leedahay barnaamijyo ay ku bixinayso gunnooyinka ka-shaqeeyayaashooda duulimaadyada, guddiyada, iyo wadaag-macaashka. Foomamka dheeraadka ah ee mushaharku waa celcelis ahaan $ 5,200 sanadkii.
Intaa waxaa sii dheer, kani waa barnaamij wanaagsan oo u adeegayaasha duulimaadka si ay lacag dheeraad ah uga helaan mushaharkooda caadiga ah.
3. Diyaaradda American
Shaqaalaha duulimaadyada ee American Airlines ayaa qaata celcelis ahaan mushahar dhan $ 43,460 sanadkii.
Ka -hawlgalayaasha duulimaadka oo leh waayo -aragnimo baaxad leh (10%ugu sarreeya) waxay filan karaan inay kasbadaan dakhli celcelis ahaan ah $ 86,000 sannadkii, halka kuwa cusubi ay filan karaan dakhli sannadle ah oo ka yar $ 30,000.
Ka sokow gunnooyinka iyo guddiyada, American Airlines waxay sidoo kale u fidisaa ka -faa'iideystayaal iyo barnaamijyo gunno u -shaqeeyayaasha duulimaadkeeda. Foomamka dheeraadka ah ee mushaharka celcelis ahaan $ 2,825 sanadkii.
4. Diyaaradaha JetBlue
Shaqaalaha JetBlue Airways ayaa bilaabay inay kasbadaan $ 25,000 - $ 35,000 sanadkii.
Mushaharkani wuxuu daboolayaa saacadaha duulimaadka, dayr kasta, bixitaanka caalamiga ah, fasaxa, dib u soo celinta safarka, luqadda, aqoonsiga, iyo gunnooyinka kale.
Tani waa mushaarka bilowga ah. Si kastaba ha ahaatee, shaqaale badan oo ka tirsan duulimaadyada ayaa samayn kara in ka badan $ 100,000.
Shirkadda Delta Airlines, ka -hawlgalayaasha duulimaadku waxay qaataan celcelis ahaan mushahar dhan $ 40,236. Si kastaba ha noqotee, markay sii joogaan Delta waqti dheer, waxay helayaan kala sareyn.
Heerka mushaharka saacaddii ayaa aad u kordhaya sannad walba. Shaqaalaha duullimaadyada sare ee Delta Airlines waxay kasban karaan $ 118,000.
Mushaharka waxaa ka mid ah mushaharka saacadda duulimaadka caadiga ah iyo sidoo kale qaabab kale oo dheeraad ah oo magdhow lacageed ah, oo ay ku jirto maalin walba (gunnooyinka cuntada inta lagu jiro habaynnada qaarkood), duulimaadyada caalamiga ah, maareeyaha qolka, fasaxyada, luqadda, iyo qaar kaloo badan.
Akhri: 20 Horumariyaha Shabakadda Lacagta Ugu Badan Bixiyay | Dalalka Ugu Fiican
6. Diyaaradda Hawaiian
American Airlines waxay siisaa shaqaalaha duulimaadka mushahar celcelis ahaan $ 39,000 sanadkii. Kaaliyaha duulimaadka oo leh khibrada ugu badan (10%ugu sareysa) ayaa filan kara inuu sameeyo celcelis ahaan $ 88,000 sanadkii, halka adeegaha duulimaadka oo aan lahayn khibrad uu filan karo $ 29,000 celcelis ahaan.
Iyada oo qayb ka ah barnaamijyada horumarinta xirfaddooda, Hawaiian Airlines waxay siisaa gunnooyinka ka-qaybgalayaasheeda duulimaadyada, guddiyada, iyo sidoo kale wadaag-macaashka.
Foomamkan dheeraadka ah ee lacag -bixinta celcelis ahaan $ 2,500 sanadkii.
Shaqaalaha diyaaradda Emirates Airlines waxay kasbadaan $ 36,000 ilaa $ 53,000 sanadkii.
Mushaharka ka sokow, bixinta lacag -bixinta waxaa ka mid ah saacadaha duulimaadka iyo mushaharka saldhigga duulimaadka.
Dhammaan shaqaalaha markabka waxaa la siiyaa hoy lacag la'aan ah (biilasha guryaha oo ay ku jiraan) taas oo qayb ka ah nidaamka canshuur-la'aanta ah ee Imaaraadka Carabta (UAE).
8. Hawada loo yaqaan 'Allegiant Air'
Ka -qeybgalayaasha Duullimaadka ee Allegiant Airlines waxay qaataan celcelis ahaan mushahar dhan $ 32,000 sannadkii.
Kuwa ugu khibradda badan (10%ugu sarreeya) waxay kasbadaan celcelis ahaan mushahar dhan $ 71,000 sannad kasta halka kuwa ka -hawlgalayaasha duulimaadku ay kasbadaan wax ka yar $ 26,000. Shirkaddu waxay siisaa ka-qaybgalayaasheeda barnaamijyo gunno ah, guddiyo, iyo wadaag-macaash.
Celcelis ahaan, foomamkan dheeraadka ah ee lacag -bixinta ayaa dhan $ 2,825 sanadkii.
Mushaharka bilawga ah ee shaqaalaha duulimaadka ee Qatar Airways waa 84,000 QAR - 156,000 QAR ($ 23,000 - $ 42,800).
Magdhowga aan cashuurta lahayn waxaa ka mid ah mushaharka aasaasiga ah oo lagu daray mushaharka saacadaha duulimaadka iyo ka-tegisyada; si kastaba ha ahaatee, sicirka ayaa aad ugu kordhaya ka -hawlgalayaasha duulimaadka ee khibrada badan leh.
Intaa waxaa dheer, Qatar Airways waxay siisaa hoy bilaash ah ka -hawlgalayaasha duulimaadka.
Shaqaalaha duulimaadyada ee Etihad Airways waxaa la siiyaa inta u dhexeysa 96,000 AED iyo 120,000 AED ($ 25,000 - $ 32,000) sanadkii.
Shaqaalaha diyaaraddu waxay lacag aan canshuur lahayn ka helaan lacag-bixinnada aasaasiga ah oo lagu daray waqtiga duulimaadka iyo gunnada haynta, laakiin sicirku aad buu u kordhaa marka shaqaalaha duulimaadku helo waayo-aragnimo.
Intaa waxaa dheer, Etihad Airways waxay siisaa hoy bilaash ah dhammaan xubnaha shaqaalaha.
Shaqaalaha duulimaadyada ee WestJet Airlines ayaa qaata celcelis ahaan mushahar dhan $ 35,000 sanadkii.
Kaaliyaha duulimaadka oo leh khibrada ugu badan (10%ugu sareysa) ayaa filan kara inuu sameeyo mushaar dhan $ 46,000, halka kuwa hadda bilaabaya ay filan karaan inay helaan $ 24,000.
Waxay sidoo kale bixiyaan gunnooyin, guddiyo, iyo wadaag-macaashka kalkaaliyayaashooda duulimaadka, oo u dhiganta celceliska mushaharka $ 2,825 sanadkii.
12. Duulimaadyada Xuduudaha
Ka -hawlgalayaasha duulimaadyada ee shirkadaha duulimaadyada xuduudaha ayaa qaata celcelis ahaan mushahar sanadle ah $ 29,400.
Ka -hawlgalayaasha duulimaadka ee leh khibradda ugu badan (10%ugu sarreeya) waxay filan karaan inay kasbadaan $ 45,000 celcelis ahaan sannadkii, halka kuwa bilowga ah ay filan karaan celcelis ahaan bixinta wax ka yar $ 27,000.
Shirkadda diyaaradaha ee Frontier ayaa sidoo kale siisa ka-faa'iideystayaasha duulimaadyada gunnooyin, guddiyo, iyo barnaamijyo faa'ido-wadaag, celcelis ahaan $ 1,100 sanadkii.
13. Diyaaradda Spirit
Shirkadaha Diyaaradaha ee Spirit waxay siiyaan shaqaalaheeda duulimaad mushahar celcelis ahaan $ 39,000 sanadkii.
Shaqaalaha duulimaadyada oo leh waayo -aragnimo ballaaran waxay filan karaan celcelis ahaan mushaharka $ 68,000 sannadkii, halka kuwa bilowga ah ay filan karaan inay sameeyaan $ 25,000 oo keliya sannadkii.
Sidoo kale, Shirkadda Diyaaradaha ee Spirit Airlines waxay siisaa gunnooyin, guddiyo, iyo barnaamijyo faa'ido-wadaag ah ka-hawlgalayaasha duulimaadkeeda, taas oo celcelis ahaan lacag-bixinteedu tahay $ 1,500 sannadkii.
14 Southwest Airlines
Shaqaalaha diyaaradda Southwest Airlines ayaa qaata celcelis ahaan mushahar dhan $ 42,000 sanadkii. Ka -hawlgalayaasha duulimaadka ee leh khibrada ugu badan waxay filan karaan inay sameeyaan celcelis ahaan $ 65,000 sanadkii, halka bilowgaas uu filan karo wax ka yar $ 30,000.
Shirkaddu waxay kaloo leedahay sumcad ah inay ku dhex jirto shaqaalaha ugu qanacsan shirkad kasta.
Intaa waxaa sii dheer, Southwest Airlines waxay leedahay barnaamij siiya gunnooyin, guddiyo, iyo wadaag-macaashka kaaliyayaashooda duulimaadka, oo celcelis ahaan ah $ 4,800 sanadkii.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican warshadaha ee mushaharka dheeraadka ah.
15. Air Canada
Air Canada Airlines waxay siisaa shaqaalaheeda duulimaad mushahar celcelis ahaan ah $ 39,000 sanadkii. In kasta oo adeegayaasha duulimaadka oo leh khibrad aad u weyn ay filan karaan inay kasbadaan qiyaastii $ 65,000 sanadkii, bilawga adeegayaasha duulimaadku waxay filan karaan inay kasbadaan wax ka yar $ 24,000.
Air Canada sidoo kale waxay leedahay barnaamij ay ku bixinayso ka-qaybgalayaasha duulimaadyada gunnooyinka, guddiyada, iyo wadaag-macaashka, oo celcelis ahaan ah $ 2,825 sanadkii.
Air Canada waxay bixisaa wax ka yar qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee waaweyn sida shirkado badan oo yaryar. Iyada oo ay taasi jirto, waxay leedahay sumcad weyn marka ay timaado daaweynta shaqaalaha.
Akhri: 13 Qof Ee Ugu Mushaharka Badan Dunida | Faallooyinka ugu Fiican
Noqoshada Kaaliye Duulimaad waa heshiis weyn.
Farqiga kuma jiro shaqada lafteeda maxaa yeelay dhammaantood waa isku mid; waa diyaaradda aad dooratay si aad u dhisto xirfaddaada. Sumcad ay dhistay waayeelnimadu waa udub -dhexaadka warshadan, markaa si xikmad leh u dooro.
Midkeen kasta wuxuu leeyahay rabitaankiisa iyo baahidiisa.
Tixgeli dhammaan xulashooyinka oo go'aanso waxa kuugu muhimsan adiga. Markaad sidaas samayso, waxay kugu hagi doontaa shirkadda diyaaradaha ee ku habboon baahiyahaaga. Waxaad markaa bilaabi kartaa inaad dalbato!
Shirkadda saxda ah ayaa fure u ah in xirfaddan lagu guuleysto.
FAQ ee Shaqaalaha ugu sarreeya ee duulimaadka
Waa kuma adeegaha duulimaadka ee ugu mushaarka badan?
Sannadka 2019, mushaharka dhexdhexaadka ah ee ka -hawlgalayaasha duulimaadku wuxuu ahaa $ 56,640. Sannadkaas, 25 boqolkiiba shaqaalaha ugu mushaharka badan waxay kasbadeen $ 67,040, halka boqolkiiba 25 ee ugu mushaharka yar ay kasbadeen $ 41,070.
Intee in le'eg ayay tahay inaad noqoto kaaliye duulimaad?
Geedi socodku wuxuu noqon karaa mid waqti qaata oo dhib badan. Habka shaqaalaynta ee shirkadaha duullimaadku waxay qaadan kartaa 3-6 bilood haddii resumeygaagu ka soo gudbo wareegga koowaad. Tartanka ayaa daran. Waxaa jira ku dhawaad ​​1 milyan oo codsi oo lagu buuxinayo 5,000 - 10,000 shaqooyin kaaliye duulimaad.
Sidee loo siiyaa shaqaalaha diyaaradda?
Qiyaasta saacadlaha ee adeegaha ayaa guud ahaan la xisaabiyaa laga bilaabo waqtiga albaabka diyaaraduhu xirmo ilaa waqtiga dib loo furo (oo badanaa loo yaqaan “time block”). Celceliska saacaddii saacad ee kalkaaliyaha duulimaadka leh shirkad weyn waa $ 25-30, waxayna ku kala duwan tahay hadba inta ay la joogeen shirkadda.
Maxay yihiin qasaarooyinka aad ku noqon karto adeege duulimaad?
Duulimaad Bilaash ah. Shirkadaha diyaaradaha badankoodu waxay u oggolaadaan kalkaaliyayaashooda duulimaadka inay lacag la'aan ku duulaan markay shaqaynayaan.
Qiimo -dhimista Diyaaradda.
Magdhowga Kharashka (Maalin kasta)
Booqashooyinka Hoteelka Lacag -bixinta.
La kulanka dad cusub.
401 (k) iyo Qorshayaasha Hawlgabka.
Immisa saacadood ayay shaqaalaha duulimaadku shaqeeyaan toddobaadle?
Inta badan ka -qaybgalayaashu badanaa waxay ku kooban yihiin inay shaqeeyaan 12 saacadood oo wareeg ah, laakiin qaarkood ayaa loo oggol yahay inay shaqeeyaan 14-saac oo is-beddel ah. Kuwa ka shaqeeya duullimaadyada caalamiga ah ayaa sida caadiga ah loo oggol yahay inay shaqeeyaan waqti -dheer. Ka-qaybgalayaashu waxay caadiyan ku qaataan 65-90 saacadood hawada iyo 50 saacadood oo diyaarin diyaarado rakaab ah bil kasta.
10 Baabuurleyda Ugu Lacagta Badan | Shaqooyinka Ugu Fiican
20 Wakiilada Ciyaaraha Ugu Lacagta Badan | Faallooyinka ugu Fiican
10 Qandaraaslayaasha Ugu Mushaarka Badan Gobolka ugu Fiican
15 Shaqooyinka Tafaariiqda ee Ugu Lacag Badan 2022
10 Podcast -yada Dembiyada Dhabta ah ee ugu Fiican ee Wakhtiga oo dhan
Buugga Maaliyadda Shaqsiyeed ee ugu Wanaagsan ee La Heli karo 2021
Maaliyadda shakhsi ahaaneed waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee la barto marka ay timaado barashada sida loo…
Maalgelinta Hantida Guryaha ee 15 ee Bilowgayaasha 2022
Waxaad samaysaa lacag weyn marka aad samayso maalgashi sax ah oo soo celin kara soo celin qurux badan. Inkastoo siyaabo badan…
Sida Loo Bilaabo Shirkad 2022 | Tilmaan Fudud oo Tusaha Tallaabada ah
Markaad go'aansato inaad bilowdo ganacsi, mid ka mid ah waxyaabaha maskaxda ku soo dhacaya waa ...
Lacag ku bixi si aad u duubto Baabuurkaaga: Gawaarida ugu Wanaagsan ee Gigs kuu ah 2021
Waxaa lagu qiyaasaa in 29% dukaamaystayaashii, ee iibsada alaab ay go'aankooda iibsi saamayn ku leeyihiin…
Jim Rohn wuxuu soo xiganayaa Isbedelka, Guusha iyo Horumarka Shakhsiyeed
Miyaad ka baqaysaa inaad raacdo riyadaada oo aad ku noolaato nolol guul leh? Weligaa daqiiqad ayaad ku heshay…
Dhammaan Beddelka Turbotax ee 2022? Isbarbar Dhigyada Degdegga ah
Waxaa laga yaabaa inay run tahay in Intuit's Turbotax ay dadku u isticmaalaan sannado badan si ay u bixiyaan canshuuraha ay sababto qaar…